Taageero culus oo ey heshay Birgitta Ohlsson - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jasenko Selimovic (L), xildhibaan baarlamanka EU. sawir: Sawirle: Hans Runesson
Taageero culus oo ey heshay Birgitta Ohlsson
Maxaa xigi doona?
La cusbooneeyay onsdag 14 september 2016 kl 16.54
La daabacay onsdag 14 september 2016 kl 15.56
Codadkii ka soo yeerey qaar kamid ah hoggaanka sare ee xisbiga Liberalerna ee qeexayey in Birgitta Ohlssoniska casisho xubin-nimada hoggaanka xisbiga oo ey ka hor-yimaadeen siyaasiyiindhumuc ku leh xibiga.
Cecilias Malmström ahna xubintadalkan u matasha hoggaanka sare ee EU iyo Jasenko Selimović, kana tir-sanxil-dhibaannada baarlamanka ee EU, labadubana xubno ka yihiin xisbiga L, ayaadhalleeceeyn ballaaran u soo jeediyey hoggaamiyaha xisbiga Liberalerna JanBjörklund.
– Waa ay caddahay in eedeeyntadusha lagaga tuurey xil-dhibaan baarlamanka ku jirta ee ka gaabsatay fikir aanxisbiga laga dhaadhicin, sida uu sheegay Jasenko Selimović.
Jasenko Selimović ayaa sheegay in fikirrada Jan Björklund ee in la mamnuuco iskuullada mulkida loo leeyahey ee diimaha salka ku haya iyo in xisbiga Sverigedemokraterna lagu casumo wada-hadallada dawladdu la yeelato xisbiyada mucaaradka ee la tashiga siyaasadeed aaney aheyn fikirro xisbigu u dhan yahay ama laga soo dhaadhiciyey.
– Xaq ayuu hoggaamiyaha xisbigu u leeyahay fikirradiisa, dadka kalena sidoo kale ayey xaq ugu leeyihiin iney ka aamusaan ama iska diidaan, sida uu sheegay Selimović.
– Fikirka caamka ah ee xisbiga Liberalerna maahan in xibiga Sverigedemokraterna wada-hadal lagu casumo. Marka ma garan karo sababta ciddii ka aamusta loogu arki karo dembiile.
Selimović ayaa sheegay in shuruudda inay xilka hoggaanka sare ee ururka iska casishaa tahay mid lala yaabo, isagoona intaa raaciyay in Birgitta Ohlsson ay doorashadii heshay codad laba jibbar ka badan hoggaamiyaha xisbiga L.
– Ma fahmi karo sababta ey xildhibaannada xisbigu ku leeyahay baarlamanka uga shireyaan arrinkaa. Xildhibaannadu maahan kuwii u doortey inay Birgitta Ohlsson hoggaanka sare ee xisbiga xubin ka noqoto, mana ahan iney ka shiraan arrinkaa, sida uu sheegay.
Selimović ayaa ka welwel-san, sida uu sheegay in xisbiga Liberalerna ay taageeradiisu hoos ugu sii dhaceeyso xadka ah 4% ee baarlamanka lagu soo galo.
– Haddii uu hoggaanka xisbigu mideeyn waayo xubnaha xisbiga caqabad ballaaran ayaa na soo wajaheeysa doorashada foodda innagu soo haysa.
Ma inuu Björklund jagada iska casilaa?
– May, u maleeyn maayo, hase yeeshee loo baahan yahay in laga fekero xaaladda guud ahaan iyo sida ay ku aloosantay.
Cecilia Malmström ayaa sidoo kale taageero u fidisay Ohlsson.
– Birgitta Ohlsson waa siyaasiyad, geesiyad ah. Boos cad oo aanu mugdi ku jirin ayayna ku leedahay hoggaanka sare ee xisbiga xisbiga. Taageero ballaaran ayay ka heshay xubnaha xisbiga, waana mid aan qabo inay xubin ka sii ahaato hoggaanka sare ee xisbiga, sida ay sheegtay.